नयाँ अध्ययनले भन्यो– 'भात खाँदा तौल घट्छ' ! - Sabal Post
नयाँ अध्ययनले भन्यो– ‘भात खाँदा तौल घट्छ’ !
बुटवल – जापानमा गरिएको एक सर्वेक्षणले भात खाँदा मानिसको तौल घट्ने देखाएको छ । यो सर्वेक्षण १३६ देशका मानिसमा गरिएको थियो । ती मानिसको भात खाने चलन तथा क्यालोरी इनटेकलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा हरेक मुलुकका क्यान्डिडेटको बीएमआई (बडी, मास इन्डेक्स)को डाटालाई पनि हेरिएको थियो ।
सर्वेक्षणका लिड रिसर्चर प्रोफेसर टोमोको भन्छिन्, ‘‘अध्ययनबाट के देखियो भने, जुन देशमा भात मुख्य भोजनका रुपमा खाइन्छ त्यहाँ मोटा मानिस कम भेटिए । पश्चिमी मुलुक जहाँ भात निकै कम खाइन्छ, त्यहाँ मोटा मानिस बढी भेटिए ।’’
उनका अनुसार चामलमा फ्याट कम हुने हुनाले पनि यसको सेवनले मोटोपना बढाउँदैन । यसमा पर्याप्त मात्रामा पोषक तत्व पनि हुन्छ । भात खाएपछि लामो समयसम्म भोक लाग्दैन । यसकारण भात खानेहरु ‘ओभरइटिङ’को समस्याबाट पनि मुक्त हुन्छन् । जब ‘ओभरइटिङ’ बाट मानिस मुक्त हुन्छन् तब तौल त घट्ने नै भयो । भात खाँदा बढी मोटाउने र रोटी खाँदा शरीर कम तौलको हुने बुझाइ नेपालमा पनि आम बन्दै गएको छ । नेपालमा भात खाने चलन बढी नै छ, पछिल्लो समय मानिसहरुमा मोटोपनको समस्या बढ्न थालेपछि भात छाडेर रोटी खाने चलनमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
भाता नखाई चित्त नबुझ्नेका निम्ति यो पक्कै पनि खुसीको खबर हुनुपर्छ । त्यसो त भातबाहेक अन्य खानेकुरामा कतिपय नेपालीको ध्यान कम जान्छ । भातलाई मात्र खाद्य मान्ने जमात पनि यहाँ ठूलो छ । तर भातले शरीर वृद्धि भइरहेको भन्ने बुझाइ गलत रहेको तथ्य पछिल्लो समय जापानमा गरिएको यस सर्वेक्षणले देखाएको छ । – नवभारत टाइम्समा आधारित
एनसेल लाभकर विवाद : सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले…
कस्तो अचम्म, ७३ वर्षको उमेरमा बच्चा, त्यो…
जिपी कोइराला फाउन्डेसन अमेरीकामा समाजसेवीहरु संग भेटघाट
देवदह जेसिजको अध्यक्षमा अधिकारी निर्बाचित
नेपालमा कर लागु गर्नु अघि सरकारले ध्यान…
मन्चद्धारा सत्यवतिका पहिरो प्रभावितलाई राहत वितरण